बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ? कस्ता क्यान्सर बढी देखिएको छ? :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवस बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ? कस्ता क्यान्सर बढी देखिएको छ?
रिता लम्साल मंगलबार, फागुन ३, २०७८, ०६:१६:००
आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवस नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा वार्षिक १५०० जति बालबालिकाहरुमा नयाँ क्यान्सर हुने अनुमान गरिएको छ। बाल क्यान्सर सम्पूर्ण क्यान्सरहरुमा छैठौं र बाल स्वास्थ्य समस्याहरुमा नवौं प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या हो। नयाँ बिरामीमध्ये बाल क्यान्सरको उपचारको पहुँचमा करिब एकतिहाइ मात्र रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्।
बालबालिकामा हुने क्यान्सर कस्तो खालको क्यान्सर हो? नेपालमा बालबालिकामा हुने क्यान्सरको अवस्था र उपचारमा पहुँचको अवस्था के छ? क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने? क्यान्सरको उपचार गर्न कति समय लाग्छ? लगायतका विषयमा डा गिरीसँग स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले गरेको कुराकानीः
बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ?
बालबालिकामा हुने क्यान्सर कस्तो खालको क्यान्सर हो?
कान्ति बाल अस्पतालमा कस्ता क्यान्सरका बिरामी बढी छन्?
करिब आधा बिरामी रक्त क्यान्सरको भन्नुभयो, बालबालिकामा रक्त क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? यसको लक्षण के हो?
अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने?
क्यान्सर भएका बालबालिकाहरु सुरुवाती अवस्थामै उपचारका लागि आइरहेका छन्?
क्यान्सर भएका बालबालिकाको उपचार समयावधि कति हुन्छ?
सरकारले क्यान्सरको उपचारमा दिने सहुलियत क्यान्सर भएका बालबालिकाका लागि पर्याप्त छ?
नेपालमा क्यान्सर भएका बालबालिका कति छन्? उपचारको पहुँचमा कति छन्?
किन क्यान्सरका बालबालिका उपचारको पहुँचमा छैनन्?
बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचारमा सहज पुहँचका लागि राज्य र सरोकारवालाले के गर्नुपर्छ?
पहिलो कुरा त बाल क्यान्सर सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ। केके गर्नुपर्ने आवश्यकता छ? भनेर पहिचान हुनुपर्छ। वार्षिक लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ। त्यसको खर्चको हिसाब गरी खर्चको स्रोतको पहिचान पनि हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवसको अवसरमा के सेन्देश दिन चाहनुहुन्छ?